ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်
မြန်မာ | အင်္ဂလိပ်
ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှ မှုအရင်းအမြစ်များ
သုသေတန နှင့် စာတမ်းများ
ဗီဒီယို နှင့် သက်ဝင်လှုပ်ရှားဗီဒီယိုများ
Monthly NewsLetter June, 2018
40 views 2018-06-29
Welcome to the June Edition of GEN Monthly Newsletter! We had hadabusy time with workshop and meeting for the inclusion of gender in di... ဆက်ဖတ်ရန်.
GEN Monthly Newsletter for May, 2018
165 views 2018-05-30
Welcome to the May Edition of GEN Monthly Newsletter! We had haveabusy time withanew project launching, GBV forum, workshop and meeting for inclusion of gender in different sectors.
Each month, we will askaGEN member, friend or s... ဆက်ဖတ်ရန်.
GEN's Monthly Newsletter for April,2018
261 views 2018-05-02
Welcome to the April edition of the GEN Monthly Newsletter! We wish you all have new strength after Thingyan Holiday and haveajoyful and successful life in this Myanmar New Year!
Each month, we will askaGEN member, friend or staffer for some insight int... ဆက်ဖတ်ရန်.
GEN's Monthly Newsletter for April,2018 (Myanmar)
160 views 2018-05-01
၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလအတွက်လစဉ်သတင်းလွှာ ရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကာလနဲ့အတူ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကိစ္စများကို ပိုမိုလုပ်ဆ... ဆက်ဖတ်ရန်.
GEN Monthly Newsletter for March, 2018 (Myanmar)
293 views 2018-04-03
၂၀၁၈ခုနှစ် မတ်လအတွက်လစဉ်သတင်းလွှာ ရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ မတ်လဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့နှင့် အတူ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲများစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သော လတစ်လလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေကြသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၁၃၀) ကျော်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မတူကွဲပြားပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
© 2021 - ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှ ရေးကွန်ရက်